သီချင်းစာသားမော်ကွန်း — ခရီးစဉ်လီ - တရားဝင် SITE ကို
သီချင်းစာသား သီချင်းစာသား သီချင်းစာသား သီချင်းစာသား သီချင်းစာသား သီချင်းစာသား သီချင်းစာသား သီချင်းစာသား သီချင်းစာသား သီချင်းစာသား သီချင်းစာသား သီချင်းစာသား သီချင်းစာသား သီချင်းစာသား
ဤတွင်ခရီးစဉ်ရဲ့ပဉ္စမစတူဒီယိုအယ်လ်ဘမ်ဘို့ရှိသမျှကိုသီချင်းစာသားတွေဟာ တက်. အသီးအသီးလမ်းကြောင်းများအတွက်သီချင်းစာသားကြည့်ရှုရန်သီချင်းခေါင်းစဉ်ကိုအပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ. ခံစားကြည့်ပါနဲ့မိတ်ဆွေတစ်ဦးနှင့်အတူဝေမျှ!
4. က Manolo ပေ. Lecrae
6. အားလုံး Up ကိုထလော့ (Interlude)
7. အားလုံး Up ကိုထလော့
8. တင့်တယ်ဘဝက2(သတ္တုတွင်း)
9. အိပ်မပျော် ပေ. အန်ဒီ Mineo
11. လာဇရုကို ပေ. This'l
12. အားလုံးချစ် ပေ. နာတာလီ Lauren
13. ငါ Gone ရယ်
14. ချိုမြိန်အောင်ပွဲခံ ပေ. Dmitri McDowell နှင့်လအောစမစ်
ငါရှည်လျားလွန်းငါ yawning တာပါဘို့အိပျပျြောခဲ့
ကောင်လေးတစ်ယောက်သင်သည်အဘယ်သို့ဟုဆို? သင်၏နှုတ်ကိုပိတျထားတက် Hold
လူသေ holla မဟုတ်နိုင်, သင်သည်အဘယ်သို့ရင်ဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်းပြောနေတာ?
ထိုခေါင်းတလားကိုပိတ်လိုက်ပါ, တရားဟောဆရာမခေါ်, သူဒါသွားကြောင်း
ငါတစ်စုံတစ်ယောက်လာမယ့်ကြားသိ, အော်ဟစ်တစ်ခုခုဟုဆို, “ထွက်လာသည်”
သင်္ချိုင်းတွင်းထဲကတက် Hopped, မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ
ယခု မှစ. သင်လာဇရုကိုအကြှနျုပျခေါ်နိုင်ပါတယ်
လင်္ကာ 2: (This'l)
Yessir ယခုတစ်မိနစ် bruh စောင့်ဆိုင်း
ငါ y'all မြင့်မားသင်၏လက်နှင့်အတူအဖျားခတ်ကြည့်ရှု
ကစည်းချက်ချွတ်ယူရန်အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေ, 808standby အပေါ် 's
ကတစ်စက်ရိုက်နှက်ကြသောအခါအဆိုပါမြေပြင်တုန်လှုပ် gon, ပြိုကျခြင်း
ငါ၏အ leash ငါ့ကိုပယ်ကြကုန်အံ့ကျေးဇူးပြုပြီး
ငါကခံစားမိ, ငါကခံစားမိ, ငါအရမ်းကောင်းသော feeling တာပါ
ငါသည်နံနက်အချိန်၌နိုးဘူးဆိုရငျ, ငါပွင်ဖြစ် gon တာပါ bruh
အဘယ်သူမျှမနှေး, ကျွန်တော်တို့အနိုင်ရ gon
အိုး, မင်းကိုချစ်တယ်, yeah
ငါပြောပြဘာလဲဆိုတာအဘယျသို့ verbalize ရန်ခက်ခဲဒါဟာင်
ငါ၏အ mini ကိုအကြှနျုပျမှ, ငါ၏အနညျးငယျလူကို
curly တောင်မြောက်ရိုင်း, သင်တစ်ဦး leer ထက်လက်ကမ်းကြော်ငြာတစ်စောင်သော်လည်းဖြစ်
သငျသညျသူတို့အပျေါမှာကရောထွေးဆိ swag တယ်
သင့်ရဲ့ mama သူတို့နှင့်ပေါ်တွင်သင်၏အဖေတူလိုက်ရှာ
သငျသညျအကြှနျုပျ၏စိတျကိုအပေါ်အမြဲတမ်းအဆင်သင့်, ငါသည်သင်တို့ရှိသမျှသည်သတ္တုတွင်းနေမယုံကြည်နိုင် (2X ကို)
က ammo သော့ခတ်နှင့် loaded တယ်
ငါမ burner အကြောင်းပြောနေတာသည်မဟုတ်
စာမျက်နှာ Flip, ငါကပေါက်ကွဲမယ်
က Manolo အတွက်အခန်းတယ် (nolo)
က Manolo (nolo) က Manolo (nolo) က Manolo (2X ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ပါ)
လင်္ကာ 1 (ခရီးစဉ်ကို):
နှစ်ချက်အစွန်း, နှစ်ဆစည်, ပေါက်ကွဲသံကြီး bang
ငါကဒီမှာနဂါး facing ထွက်တာပါ, ငါသည်ငါ၏စိတ်ကိုမထှကျဘဲဖြစ်ပါတယ်
ငါဂရုမစိုက်ပါဘူး, ငါဂရုမစိုက်ပါဘူး, ငါလွယ်ကူသောကြောင့် ယူ. မသွားနိုင်
ငါစာမကျြနှာကိုလှန်ကြည့်တာပါ, ငါသည်တဗီဒီယိုကလစ်နှင့်တစ်ဦး gauge ခလုတ်-ပျော်ပါတယ်
မှနျတရားနှငျ့သငျသညျ hit, ၎င်း၏တိုင်းထားသောစာပိုဒ်တိုများအတွက်
လင်္ကာ2(Lecrae):
က Manolo က Manolo, ငါကဒီမှာစာတိုက်သွားထုတ်တာ
အကြှနျုပျ၏မိတ်ဖက်ငါကပျောက်ဆုံးထင်, ငါ၏အ mama ငါ Loco ပေါ့စဉ်းစား
မိတ်ဆက်ခြင်း / နမူနာ
oh oh, အလင်းရောင်
ရှေ့ဆက်အပြည့်အဝအမြန်နှုန်းကို သွား., ကျွန်တော်တို့အနိမ့်ပျံသန်းပေမယ်
ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကသူ store မှာတယ်ပဲဆိုတာသိကြပါဘူး, နောက်တဖန် okie doke ဘို့ကျဆင်း
'' ကအလင်းမှီတိုငျအောငျရဲရ, ကျနော်တို့သွားဘယ်မှာမသိရပါဘူး
သို့သော်ထိုသို့အသက်အဘို့အဘယ်သူမျှမမှာ google မြေပုံမဟုတ်ပါဘူး, နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့မီးကျိုးတူရဲ့
သက်သေပြ: ကျွန်တော်တို့လျှပ်တစ်ပြက်, ရွှေရဲ့အချို့သောဘဏ္ဍာကိုအပေါ်ဖြတ်သန်း
ငါသူက switch ကိုနှင့်ထွန်းလင်းလှန်ပါလိမ့်မယ်ကြောင်းဆုတောငျးလတာ, ကလေးတွေမျက်စိကန်း
"ရပါတယ်” ငါ၏အအယ်လ်ဘမ်သစ်များအတွက်မှတ်တမ်းတင်ထားရန်ပြီးခဲ့သည့်သီခငျြးမြား၏တစျခုဖွစျသညျ, အဆိုပါကောင်းမွန်သောဘဝ. Lecrae ငါကတကယ်တော့တစ်ဦးလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောသီချင်း wrote နှင့်မှတျတမျးတငျထား, ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးမှာကြိုက်တယ်. ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးမှာကျွန်တော့်ကိုတော်တော်လေးကောင်းသည်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်; ကျွန်တော်အလွန်ကြီးစွာသောအရာတစ်ခုခုထွက်ထားချင်တယ်. ဒါကြောင့်ငါမသေးများအတွက်သီချင်းစာသားကျမ်းစာ၌ရေးထားသည်မဟုတ်ခဲ့ကွောငျးကိုသူ့အဘို့အနည်းငယ်စည်းချက်ကစား, ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုနှင့်အတူမေတ္တာ၌နှစ်ဦးစလုံးခဲ့ကြ. ဒါဟာမော်ကွန်းခဲ့သည်, ကြူးကျြောသော, နှင့်မှတ်မိလွယ်တဲ့.
ငါခရစ်တော်ကျွန်ုပ်တို့၏လုံခြုံရေးအတွက်ဆက်သွယ်ထားတဲ့သီခငျြးကိုရေးချင်တယ်သူ့ကိုသို့ပြောသည်. ငါကွောကျရှံ့ခွငျးတှငျနထေိုငျရပ်တန့်ဖို့ခရစ်ယာန်တွေကိုအားပေးနှင့်ရောမတွင်နေထိုင်သောစတင်ချင်တယ် 8. ကျနော်တို့က "ငါအကောင်းပေါ့ပေါ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်” အကွောငျး, ကျနော်တို့အကူအညီသခင်ဘုရားအဘို့ဟုမေး, ကျွန်တော်ရောကျရဲ့အတ္တလန်တာစတူဒီယို၏ဆန့်ကျင်ဘက်ထောင့်၌ရေးသားစတင်. ကျနော်တို့ထိုညဉ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသံအများစုမှတျတမျးတငျထား, ကအားလုံးကိုပြုလေ၏သောအခါကျွန်တော်ကိုခစျြ.
ငါဒုက္ခရဲ့အကြှနျုပျအဘို့လာမယ့်စကားကိုနားထောငျ, သေဆုံးသည်ငါ့တံခါးနားလမ်းမှာဖြစ်ပါတယ် /
ကြောက်လန့် I'ma bro ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ကပြောပါတယ်, သို့သော်ငါ၏သခင်ပြောတဲ့စကားကိုမဟုတ်ပါဘူး /